မျောရငျဟို ရဲ့ အီတလီမွကေို တဈကြော့ပွနျ ခရီးမှာ ရိုးမားပရိသတျတှေ တခဲနကျ ကွိုဆို – the One Sports Journal
စီးရီးအကေလပျ အငျတာမီလနျအသငျးနဲ့ သမိုငျးဝငျ ဆုဖလား ၃ လုံးအောငျမွငျမှု စိုကျထူထားခဲ့တဲ့ မျောရငျဟိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စီရီူအေ ပွိုငျပှဲမပွီးဆုံးခငျကတညျးက ရိုးမားအသငျးရဲ့ နညျးပွသဈဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
မနကေ့ မျောရငျဟိုဟာ သူ့ရဲ့ အသငျးသဈ ဖွဈတဲ့ ရိုးမားအသငျးရှိတဲ့ အီတလီမွကေို ရောကျရှိခြိနျမှာ လယောဉျကှငျးက အထှကျမှာတငျ ရောမမွို့က ပရိသတျတှကေ ပျေါတူဂီသား နညျးပွကွီးကို ဆယျလီ တဈယောကျလို တခဲနကျ ကွိုဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ မျောရငျဟိုကလညျး ပရိသတျတှကေို ပွနျလညျနှုတျဆကျခဲ့ ပွီး အသငျးသဈ ပရိသတျတှနေဲ့တှဆေုံ့မှုအဖှငျ့ဟာ အတျောကိုလှပခဲ့ပါတယျ။
အင်ျဂလနျ ကလပျတှမှော အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာရယူနိုငျခဲ့သလို ဘောလုံးလောကမှာ တျောကီတဈပေါကျနဲ့ လြှံလြှံတောကျတဲ့ မျောရငျဟိုဟာ ခယျြဆီး၊ ယူနိုကျတကျ အသငျးတှမှော ဖလားတှရေယူပေးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ စပါးအသငျးမှာတော့ ကားရာဘောငျးဖလားဗိုလျလုပှဲမတိုငျခငျမှာ ထုတျပယျခံခဲ့ရပါတယျ။ မျောရငျဟိုဟာ သူကိုငျတှယျတဲ့အသငျးတိုငျးမှာ ဆုဖလားတှရေယူနိုငျခဲ့တဲ့ အစဉျအလာဟာလညျး စပါး ပိုငျရှငျ လီဗိုငျး ကွောငျ့ ကြိုးပကျြခဲ့ရတာဟာ သူ့အတှကျတော့ စိတျပကျြစရာ မှတျတမျးတဈခု ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
မျောရငျဟိုဟာ ၂၀၀၄ မှာ ပျေါတိုအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားရယူနိုငျခဲ့ပွီး တဈလအကွာ ခယျြဆီးအသငျးကို ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ကာ ခယျြဆီးအသငျးကို အမှတျပေးခနျြပီယံ နှဈနှဈဆကျ ဖွဈစခေဲ့သလို ခယျြဆီးအသငျးရဲ့ ကစားဟနျတဈခုကိုလညျးတညျဆောကျနိုငျခဲ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ အဗေရာမိုဗဈ ရယူလိုတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကိုတော့ ရရှိအောငျမစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အသငျးကနေ ထုတျပယျခံခဲ့ရပါတယျ။
သူဟာ ခယျြဆီကနေ ထုတျပယျခံရခြိနျမှာ အငျတာမီလနျကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီး စီးရီးအခေနျြပီယံ နှဈကွိမျဆကျ ရစခေဲ့ပွီး ဒုတိယမွောကျ ရာသီမှာတော့ အသငျးရဲ့ သမိုငျးမှာ ပထမဆုံး ခနျြပီယံလိဂျဖလား ကိုအရယူပေးနိုငျခဲ့သလို ဆုဖလား ၃ လုံး အောငျမွငျမှုကို လညျးရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ နဲ့ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘောလုံးရာသီတှဟော အီတလီမှာ မျောရငျဟိုရဲ့ အကွီးကယျြဆုံး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ နှဈတှပေါပဲ။ အငျတာမီလနျ အသငျးကိုခနျြပီယံလိဂျ ဖလားရယူပေးပွီးခြိနျမှာတော့ သူဟာ အသငျးကနနှေုတျထှကျပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးဆီကိုပွောငျးရှကေို့ငျတှယျခဲ့ကာ လာလီဂါ၊ ကိုပါဒယျရေးနဲ့ စပိနျစူပါဖလားတို့ကို အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ ခယျြဆီးနဲ့ ဒုတိယအကွိမျ ပွနျလညျ လကျတှဲခဲ့သလို (၂)နှဈအကွာမှာ ထပျမံ အထုတျခံခဲ့ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျနဲ့ စပါးတို့မှာ လညျးထုတျပယျခံနရေတာတှကွေောငျ့ စပယျရှယျဝမျး မျောရငျဟိုရဲ့ ဂုဏျသတငျးဟာ အင်ျဂလနျမှာ မှေးမှိနျသှားခဲ့ရတယျလို့ထငျရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို အသိအမှတျပွုနဆေဲ ပရိသတျတှကေ အီတလီမှာ တော့ အခိုငျအမာရှိနစေဲပါ။ အီတလီ ဘောလုံး လောကမှာ သူ့ရဲ့နညျးဗြူဟာတှနေဲ့ ရှနိုကျဒါ၊ အီတိုး၊ မီလီတို၊ ဇကျနကျတီတို့လို ကစားသမားတှပေေါငျးပွီး ပွညျတှငျးဖလား အောငျမွငျမှုတှရေယူခဲ့သလို ဘိုငျယနျကို အနိုငျယူပွီး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗိုလျဝငျခံခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုငျးကွောငျးဟာ အီတလီမှာတော့ တောကျပနဆေဲပါ။
မျောရငျဟိုအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ အောငျမွဖွေဈခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီမှာ သူ့ရဲ့ ကြျောဇောမှုတှနေဲ့ ခတျေသဈ တဈခုကို ပွနျလညျတညျဆောကျနိုငျမလား…?
ရိုးမားလို စီရီးအရေဲ့ အလယျအလတျအဆငျ့ အသငျးတဈသငျးကို မျောရငျဟိုက အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးပျေါကို ဘယျလို ဦးဆောငျပေးသှားမလဲဆိုတာ အတေျာ့ကို စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ရိုးမားပရိတျသတျတှကေတော့ သူတို့ရဲ့ အသငျးအပျေါ မျောရငျဟို ဘာမှ မလုပျပွရသေးခငျမှာတငျ ကွိုဆိုပုံက အသငျးရဲ့ဂန်တဝငျတဈယောကျ အိမျပွနျအလာကို ကွိုဆိုသလိုပုံစံနဲ့ ကို ကွိုဆိုခဲ့ပါတယျ။
မော်ရင်ဟို ရဲ့ အီတလီမြေကို တစ်ကျော့ပြန် ခရီးမှာ ရိုးမားပရိသတ်တွေ တခဲနက် ကြိုဆို
စီးရီးအေကလပ် အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ သမိုင်းဝင် ဆုဖလား ၃ လုံးအောင်မြင်မှု စိုက်ထူထားခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စီရီူအေ ပြိုင်ပွဲမပြီးဆုံးခင်ကတည်းက ရိုးမားအသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က မော်ရင်ဟိုဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းသစ် ဖြစ်တဲ့ ရိုးမားအသင်းရှိတဲ့ အီတလီမြေကို ရောက်ရှိချိန်မှာ လေယာဉ်ကွင်းက အထွက်မှာတင် ရောမမြို့က ပရိသတ်တွေက ပေါ်တူဂီသား နည်းပြကြီးကို ဆယ်လီ တစ်ယောက်လို တခဲနက် ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုကလည်း ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ခဲ့ ပြီး အသင်းသစ် ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအဖွင့်ဟာ အတော်ကိုလှပခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန် ကလပ်တွေမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူနိုင်ခဲ့သလို ဘောလုံးလောကမှာ တော်ကီတစ်ပေါက်နဲ့ လျှံလျှံတောက်တဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ ချယ်ဆီး၊ ယူနိုက်တက် အသင်းတွေမှာ ဖလားတွေရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် စပါးအသင်းမှာတော့ ကားရာဘောင်းဖလားဗိုလ်လုပွဲမတိုင်ခင်မှာ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ သူကိုင်တွယ်တဲ့အသင်းတိုင်းမှာ ဆုဖလားတွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာဟာလည်း စပါး ပိုင်ရှင် လီဗိုင်း ကြောင့် ကျိုးပျက်ခဲ့ရတာဟာ သူ့အတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာ မှတ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုဟာ ၂၀၀၄ မှာ ပေါ်တိုအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်လအကြာ ချယ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကာ ချယ်ဆီးအသင်းကို အမှတ်ပေးချန်ပီယံ နှစ်နှစ်ဆက် ဖြစ်စေခဲ့သလို ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားဟန်တစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် အေဗရာမိုဗစ် ရယူလိုတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုတော့ ရရှိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သူဟာ ချယ်ဆီကနေ ထုတ်ပယ်ခံရချိန်မှာ အင်တာမီလန်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး စီးရီးအေချန်ပီယံ နှစ်ကြိမ်ဆက် ရစေခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက် ရာသီမှာတော့ အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ကိုအရယူပေးနိုင်ခဲ့သလို ဆုဖလား ၃ လုံး အောင်မြင်မှုကို လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ နဲ့ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘောလုံးရာသီတွေဟာ အီတလီမှာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေပါပဲ။ အင်တာမီလန် အသင်းကိုချန်ပီယံလိဂ် ဖလားရယူပေးပြီးချိန်မှာတော့ သူဟာ အသင်းကနေနှုတ်ထွက်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းဆီကိုပြောင်းရွှေ့ကိုင်တွယ်ခဲ့ကာ လာလီဂါ၊ ကိုပါဒယ်ရေးနဲ့ စပိန်စူပါဖလားတို့ကို အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ချယ်ဆီးနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် လက်တွဲခဲ့သလို (၂)နှစ်အကြာမှာ ထပ်မံ အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နဲ့ စပါးတို့မှာ လည်းထုတ်ပယ်ခံနေရတာတွေကြောင့် စပယ်ရှယ်ဝမ်း မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဂုဏ်သတင်းဟာ အင်္ဂလန်မှာ မှေးမှိန်သွားခဲ့ရတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုနေဆဲ ပရိသတ်တွေက အီတလီမှာ တော့ အခိုင်အမာရှိနေစဲပါ။ အီတလီ ဘောလုံး လောကမှာ သူ့ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ရှနိုက်ဒါ၊ အီတိုး၊ မီလီတို၊ ဇက်နက်တီတို့လို ကစားသမားတွေပေါင်းပြီး ပြည်တွင်းဖလား အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့သလို ဘိုင်ယန်ကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗိုလ်ဝင်ခံခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ အီတလီမှာတော့ တောက်ပနေဆဲပါ။
မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အောင်မြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီမှာ သူ့ရဲ့ ကျော်ဇောမှုတွေနဲ့ ခေတ်သစ် တစ်ခုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မလား…?
ရိုးမားလို စီရီးအေရဲ့ အလယ်အလတ်အဆင့် အသင်းတစ်သင်းကို မော်ရင်ဟိုက အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ဘယ်လို ဦးဆောင်ပေးသွားမလဲဆိုတာ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ရိုးမားပရိတ်သတ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အသင်းအပေါ် မော်ရင်ဟို ဘာမှ မလုပ်ပြရသေးခင်မှာတင် ကြိုဆိုပုံက အသင်းရဲ့ဂန္တဝင်တစ်ယောက် အိမ်ပြန်အလာကို ကြိုဆိုသလိုပုံစံနဲ့ ကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။